Belladonna - imbiza ezinesihlungu we nightshade, okuyinto ikhula ukuphakama ngamamitha amabili. It is eyaziwa Belladonna, okuyinto elihunyushwe esuka izindlela Italian "uyintokazi enhle." Ngaphambi juice wakhe wesifazane isetshenziselwa ukunikeza emehlweni a kukhanye akhethekile amajikijolo wagcoba izihlathi i othi awube "kungokwemvelo". ERussia, imbiza ngokuthi beshenitsey njengoba engena ubisi ibe injabulo namandla, okubangela ukusabela ngezinye izikhathi wagan 'unwabu. Lesi simila uqonde namahlamvu engenhla Okusizayo esilinganayo, isesimweni olufana neqanda ezicijile. Belladonna blooms kusukela maphakathi no-ihlobo kuze ekwindla enkulu izimbali insimbi lwacalandze onsomi ezingcolile. Izithelo - black berry. Lesi sihlahlana elimila ihlathi imiphetho futhi entabeni emithambekeni eCrimea, eCaucasus kanye Carpathians.
Lombhalo ucashunwe ebhukwini of Belladonna. isicelo
Njengoba sekushiwo ngenhla, Belladonna enobuthi kakhulu. Ubuthi at ukusetshenziswa amajikijolo yayo noju. Kuhlanganisa lenqwaba alkaloids ahlukahlukene, futhi ayatholakala kokubili amacembe nezimpande zalesi sihlahla nezimbali zalo kanye nezithelo. Ekstarkt Belladonna ibonisa ngokugcwele izimfanelo ukwakheka kwamakhemikhali lokhu imbiza. Iqukethe hyoscyamine, skopalamin, apoatrapin, methylpyrrolidine, belladonin kanye nezinye izindawo eziningana lapho alkaloids. Futhi Kutholwe i-nicotine, sterols, flavonoid. akhiphe nesomile imbiza eyilungu izidakamizwa ezahlukene ebekiwe ubuhlungu lapho ezinzima. Lezi ukwakhiwa akhiqizwa uhlobo amaphilisi, suppositories, imithi kanye izimpushana. Kusebenza Belladonna akhiphe njengoba isidambisa-zinhlungu, antispasmodic ipheshana excretory spasm, uketshezi anda lacrimal kanye salivary nezindlala, imisipha zibe kwezicubu visceral, ukwelapha cholelithiasis, cholecystitis, isilonda esiswini kanye isilonda duodenal. I umthamo wansuku zonke kuvunyelwe ukuthola ngaphakathi, is hhayi ningi than 0.15 amagremu. Ngaphezu kwalokho, Belladonna akhiphe isetshenziswa kuyindlela yokuvimbela ushevu isikhunta.
Amalungiselelo ngesisekelo Belladonna
I kabanzi kunazo zezinto ezakha isitshalo, wathola atropine. Kuyinto alkaloid enamandla ebanzi ezahlukene isinyathelo antispasmodic. Belladonna akhiphe likhona Ukwakheka kwezidakamizwa eziningi asetshenziselwa izifo ezihlukahlukene. Amakhandlela Bheka "Anuzol" futhi "Betiol" asetshenziswa ukwelapha hemorrhoids. Medicine "Anastman" isetshenziswa somoya bronchial. Umuthi 'Bekarbon "- at asidi eliphezulu esiswini. Imithi "Besalol", "Bepasal" futhi "Bevisal" - ukwelapha wokugaya ukudla izifo ipheshana. Umuthi 'Bellalgin "- analgesic. Kusho "Bellastezin" futhi "Belloidum" ngempumelelo nge neurosis, menopause dystonia semithambo. Medicine "Corbelli" lisetshenziswa ekwelapheni isifo i-Parkinson. Futhi lokhu akuyona uhlu oluphelele imithi, okuyinto yaba isisekelo sezinguqulo Belladonna.
Yabela amalungiselelo equkethe imbiza akhiphe njengasezulwini ekwelapheni pectoris angina, isilethikusebenza, isifuba somoya bronchial, isilonda esiswini, so-renal kanye colic hepatic. Ngo Folk imithi, i-decoction imisuka Belladonna ikhambi rheumatism, neuralgia kanye sifo.
Have Belladonna kanye contraindications. nemithi Ukuthatha equkethe indlela yokwakheka akhiphe imbiza akuvunyelwe kwabesifazane abakhulelwe kanye lactating (encishisiwe ubisi supply), i-glaucoma kanye zamehlo inhliziyo.
Juice mug: izakhiwo zokwelapha kanye contraindications Izibuyekezo
I-goose omiswe - iresiphi
Plum Chinese. Incazelo emfushane izinhlobonhlobo athandwayo
Bhaka Gingerbread amakhukhi nge uqweqwe lukashukela: iresiphi ngesithombe